I-Clachtoll Holidays. I-SWIFT caravan - I-Airbnb
I-Clachtoll Holidays. I-SWIFT caravan
Clachtoll, Scotland, i-United Kingdom
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Caroline
Izindlwana zethu eziqinile zisesimweni sesimanje futhi zinkulu kakhulu. Banokushisisa okuphakathi kanye nokukhempa okuphindwe kabili. Kunamakamelo okulala amathathu anombhede owodwa olala abantu ababili nemibhede emine elala umuntu oyedwa. I-caravan ngayinye inekhishi eliphelele eline-microwave egcwele, ifriji nefriji. Ikamelo le-shower linendlu yangasese futhi kunendlu yangasese yesibili.
I-caravan ngayinye inendawo yayo yokuphumula.
Ama-caravans anendawo yokubuka ulwandle nokufinyelela okulula ebhishi elinesihlabathi esimhlophe. Ukunqaba ezinhlangothini ezimbili ze-caravans kusho ukuthi ungaphumula futhi ujabulele indawo yokukhosela. Noma ungenza indlela yakho 200 mtrs ukuya ebhishi ye-Clachtoll. Eduze kunamabhishi amahle, ongaya kuwo, amancane futhi acashile noma aqhelelene ngemoto amade noma ibhishi elifana ne-Sandwood Bay
Ukuze ufike kusayithi yethu kufanele udlule e-Assynt Coighach National Scenic Area ne-Geopark.
Kuzungeze wena kunezintaba eziyingqophamlando ezizimele zodwa ezifana ne-Suilven neQuinag. Banikeza izintaba ezihlaba umxhwele kanye nokuhambahamba.
Kukhona zonke izinhlobo zokudoba ngebhange, ngesikebhe noma ngasolwandle. Inama-loch angu-150 ongawahlola.
Imvelo enhle kakhulu enama-eagles aseLwandle, abantu abahlukahlukene abamnyama nabomvu, ama-puffins nokunye okuningi e-Handa Island. Ama-Orca, ama-Minke 's, ama-dolphins nama-Otter.
Ukushona kwelanga okumangalisayo nokungcola kokukhanya ngakho izibani zasenyakatho ziyamangalisa impela.
Njengomndeni wendawo singanikeza ulwazi oluningiliziwe lwezindawo zokudla, ukuhambahamba okumnandi noma ukuqwala izintaba, ukudoba, ukuhamba ngesikebhe noma nje indlela yokuba nohambo olujabulisayo nenhloko-dolobha A.
Hlola ezinye izinketho ezise- Clachtoll namaphethelo